बिपी प्रतिष्ठानका डाक्टर कमिसनमा, बिरामी ऋणमा Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
इटहरी : पुस २९ मा सिरहा, कल्याणपुरका ललितकुमार शाह खुट्टा भाँचिएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा भर्ना भए। भर्ना भएको १३औँ दिनमा उनलाई अपरेसन कक्ष लगियो।
खुट्टाको अप्रेसनमा लगाउने नेलको विषयमा डाक्टरहरूबीच झगडा भएको ललितले सुने। हाडजोर्नी विभाग टिम ‘ए’ का प्रमुख रोशनकुमार शाह कलवारले खोक्रो नेल प्रयोग नगर्ने अड्डी लिएपछि अप्रेसन कक्षबाट डाक्टर अमिल लिम्बु बाहिरिए।
निःशुल्क पाइने साइन नेल प्रयोग गरेर शाहले ललितको खुट्टाको अपरेसन गरे। अपरेसनपछि गरिएको ‘एक्स-रे’ मा नेल गलत ठाउँमा परेको देखियो। गलत ठाउँमा प्रयोग भएको नेल निकालेर डाक्टर अमितविक्रम शाहले खोक्रो नेल प्रयोग गरे। ललितको अप्रेसन गर्न डाक्टरले ९ घण्टा लगाए।
अप्रेसनमा कमिसन, ऋणमा बिरामी
खुट्टाको अपरेसन गराएका ललित डाक्टरबीच कमिसनमा झगडा परेको कारण आफ्नो खुट्टामा गलत नेल परेको बताउँछन्।
सुरुमा डाक्टर कलवारले सबै सामग्री लिएर अपरेसन सुरु गरेको उनले बताए। ‘निःशुल्क र बलियो हुने भयो भनेर म खुसी थिएँ,’ उनले भने, ‘तर नेलकै विषयलाई लिएर डाक्टरबीच नै झन्डै हात हालाहालको स्थिति आयो।’
उनले नै डाक्टरहरूलाई झगडा नगर्नु भनेर सम्झाउनु परेको थियो। ‘मलाई गाह्रो भइसक्यो। प्लिज झगडा नगर्दिनु न। मेरो उपचार छिटो गर्दिनु भनेर मैले भनें,’ उनले सुनाए, ‘त्यसपछि मलाई पूरै बेहोस बनाइयो। पछि पो थाहा भयो, मेरो खुट्टामा त पैसा पर्ने खोक्रो नेल पो हालेको रहेछ।’
ललितका बुबा रामकिशुन शाह कसरी ऋण तिर्ने भन्ने तनावमा छन्। सित्तैमा पाउने नेलको पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि आफ्नो ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए। ‘थप पैसा कसरी जुटाउने चिन्ता छ,’ उनले उकेरासँग भने।
खोक्रो नेल प्रयोग गरिएको विषयमा मुद्दा हाले छानबिन हुने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दुवै पक्षका डाक्टरले राम किसुनलाई सुनाइरहेका छन्। ‘इलाज गर्न आएको मान्छेलाई मुद्दामा फसाउन खोजे। थानामा लगेर मुद्दा हाल्न लगाए। त्यहाँ डाक्टरहरूले २० प्रतिशत कमिसन खाने गरेको खुलेरै स्वीकार गरे,’ ललितका बाबु रामकिशुनले भने, ‘खाना र दबाइमा खर्च गरेर उठिबास लागिसक्यो। डाक्टरको कमिसनको पनि पैसा तिर्नुपर्ने रैछ। ठूलो दशा लागेर अस्पताल आएजस्तो भएको छ मलाई। बाँकी पैसा कसरी तिर्ने हो?’
डाक्टरको विज्ञप्ति वार
डाक्टर रोशनप्रसाद शाह कलवारले विज्ञप्ति निकालेर निःशुल्क पाइने साइन नेल प्रयोगमा बन्देज लगाएर बिरामीको खर्च बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। साइन नेल प्रयोग गर्दा पसलेको पसल नचल्ने, डिलरको सामान नबिक्ने र सर्जनहरूले कमिसन नपाउने हुँदा सबैले आफ्नो विरोध गरेको उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
कमिसनको खेल पहिलादेखि नै चलेको भन्दै उनले २० देखि २५ प्रतिशत कमिसन स्वभाविक भएको स्वीकार गरेका छन्। प्रतिष्ठानभित्र नपाइने सामग्रीको लागि डाक्टरले निजी क्लिनिक तथा डिलरसँग मिलेर कमिसन लिने गरेका छन्।
यस्तै हाडजोर्नी विभाग प्रमुख विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ सहितको टोलीले पनि विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सकको पेसाको मर्यादा र गरिमा धमिल्याउने काम डाक्टर कलवारले गरेको आरोप लगाएको छ।
खोक्रो नेल छिराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला कलवारले जिद्दी गरेर साइन नेल नै छिराएको उनीहरूको आरोप छ। कलवारलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको र नयाँ लटको साइन नेल हम्बरले हानेर छिराएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
कलवारले चाँडो हुने र त्यसको असर पनि कम हुने भएकाले आफूले साइन नेल प्रयोग गर्न भन्दा कनिष्ठ सहकर्मी अमित लिम्बुले दादागिरी शैलीमा अपरेसन कक्षमा संलग्न नर्सहरूलाई निकालेको आरोप लगाएका छन्।
सोही आरोपपछि विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठले विभागका कुनै पनि जुनियर डाक्टरहरूलाई निर्देशन दिन नपाउने भन्दै ३० दिनको लागि निष्कासन नै गरेका छन्।
डाक्टरहरूको विवादमा नेपाल अर्थोपेडिक एसोसिएसनले चासो दिएर प्रतिष्ठानसँग छलफल गरेको छ। छलफलपछि एसोसिएसनको इथिकल कमिटीका सदस्य डा. यज्ञराज खरेलले डाक्टरहरुबीच वैमनस्यता नराख्ने र सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार अहिले डा. कलवारमाथिको कारबाही समेत फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ।